Exclusive: प्रत्यक्षदर्शी नर्सले गरिन्, घटना बारे पर्दाफास ! सुनाईन घटनाको नालीबेली ! (भिडियो)
पाँचथर हत्याकाण्ड, आफन्त भन्छन् : १ जनाले मात्र सबैको हत्या गरेको होईन !
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेमा ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामुहिक हत्याकाण्डमा मारिएका आफन्तले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । दुई परिवारका नौ जनाको हत्या एक जनाले मात्रै गरेको संकेत गरेर प्रहरीले हत्यारा उम्काउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा धरानबाट देबेन्द्र पौडेल, झापाबाट लक्ष्मी काफ्ले र पाँचथरबाट सरोज शर्माले लेखेका छन्।